Santa Monica မှ လွတ်လပ်စွာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » Santa Monica မှ လွတ်လပ်စွာ…
Santa Monica မှ လွတ်လပ်စွာ…
Posted by kai on Nov 29, 2011 in Science & Religion | 12 comments
မနေ့ညက.. Santa Monica ဆိုတဲ့.. ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ကလေး သွားပါတယ်..။
အဲဒီနေရာက… ပစိဖိတ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိပြီး.. အမေရိကရဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေတွေမှာ.. အလှဆုံးကမ်းခြေတခုပေါ့..။
မြောက်ဖက် နည်းနည်းတက်လိုက်ရင်.. ဟောလိဝုဒ်က ဆယ်လီဘရိတ်တီတွေ အများစုနေတဲ့.. Malibu ဆိုတဲ့မြို့ နဲ့ ကမ်းခြေရောက်ပါတယ်..။
ရောက်တော့ မှောင်နေပြီမို့.. ပင်လယ်လေနဲ့.. ရာသီဥတုက.. အေးစိမ့်နေပါပြီ..။
ဒါပေမဲ့.. လူတွေသွားသွားလာလာနဲ့.. စည်ကားနေဆဲပါပဲ..။
ပစိဖတ်သမုဒ္ဒရာကို အပေါ်စီးကမြင်ရတဲ့.. တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာဆိုပါတော့..။
ဆိုတော့.. တောင်ကုန်းရယ်.. ပင်လယ်ရယ်နဲ့ အတွဲညီညီ လှတဲ့မြို့မို့.. လူတွေအလယ်အပတ်လာကြတာဖြစ်မယ်ထင်မိပါတယ်..။
ထူးခြားတာတခုက.. ၃လမ်း(Third Street Promenade )ခေါ်တဲ့.. မြို့လမ်းလေးတခုကို.. ကားမ၀င်ရောအင်ပိတ်ပြီး.. ဈေးဆိုင်တန်းတွေနဲ့.. ထားတာပါပဲ..။
အဲဒီလမ်းကလေးဟာ.. ရာသီမရွေး.. လမ်းလျှောက်အပန်းဖြေသူတွေ.. ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့.. ရှိပါတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ.. ၀ါသနာရှင်တချို့က.. ဂီတာတီး သီချင်းဆိုကြတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ.. ၀ါသနာရှင်တချို့က..ကပြရင်း လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ဖျော်ဖြေကြတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ..ပညာရှင်တချို့က.. ပန်းချီပုံဆွဲရင်း.. ငွေရှာကြတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ.. ၀ါသနာရှင်တချို့က.. ကခုန် သီချင်းဆိုကြတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ.. တချို့က.. နိုင်ငံရေးတရားဟောကြတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ.. ဘာသာရေးဝါသနာပါသူတွေ.. ဘာသာတရားအကြောင်း စည်းရုံး ဟောပြောကြတယ်..။
အဲဒီလမ်းမှာပဲ.. အယူပြင်းထန်သူတချို့က.. ဘာသာတရားတချို့ကို.. စိန်ခေါ်ငြင်းခုန်ကြပါတယ်..။
အခုပြောချင်တာက… ခေါင်းစဉ်နဲ့အကိုက်.. “Santa Monica မှ လွတ်လပ်စွာ…” ခရစ်ယန်ဘာသာဖက်ကနေ.. အစ္စလမ်ဘာသာကို တိုက်ခိုက်နေသူ တယောက်အကြောင်းပါ..။
Truth Defenders တဲ့..။ တွီတာတော့ရှိပြီး.. အောက်မှာ.. အဲဒီလူလိပ်စာကြည့်ပါ..။
အဲဒီလူကို စင်တာမော်နီကာမှာ.. မကြာခဏ တွေ့ဖူးပါတယ်..။
… လွန်ခဲ့တဲ့.. ၃-၄နှစ်လောက်က စတယ်ထင်တာပဲ..။ .. ခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့.. မွတ်စလင်မိန်းကလေးတယောက် အပြင်းအထန် ပြန်လှန်ပြောနေတာနဲ့.. ရပ်ကြည့်ရင်း သတိထားမိသွားတယ်ဆိုပါစို့..။
အစ္စလမ်ဘာသာဖက်က မခံနိုင်လို့ ငြင်းချင်ရင်.. ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမိုက်ခ်ပေးထားပါတယ်..။ အဲဒီမှာရပ်ပြီး.. ပြန်ပြောပေါ့..။ ပရိတ်သတ်က အုံကြည့်ပြီး လက်ခုတ်တီး..ဘူးးးးဝင်လုပ်နဲ့.. ၀င်ပါတတ်ပါတယ်..။
ယူအက်စ်ရဲ့.. လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးပြောဆိုခွင့်နဲ့.. သူ့တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့… ဥပဒေတွေရဲ့ သက်ေ၇ာက်မှုကို .. မြင်သာမဲ့ ဇတ်လမ်းဇတ်ကွက်လေးပဲ ဆိုပါတော့..။
အဝေးမှမြင်ရပုံ.. ။ ရှေ့မှ အနက်ရောင်တီရှပ်နှင့် အုပ်စုမှာ အစ္စလမ်သာသနာအကြောင်း မေးချင်တာမေးပါဟု ဆိုင်းဘုတ်တင်ကာ ကိုရမ်ကျမ်းကို အခမဲ့ဝေနေသူများဖြစ်သည်။
ဒီမှာဆို ပြောကြဆိုကြရင်း ထသတ်လိုက်မယ့် အမျိုး။
မြန်မာပြည်မှာတော့ မရလောက်သေးဘူး ထင်မိပါတယ်။
“ယူအက်စ်ရဲ့.. လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးပြောဆိုခွင့်နဲ့.. သူ့တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့… ဥပဒေတွေရဲ့ သက်ေ၇ာက်မှု”
သူကြီးရေ .. ဥပဒေတွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ ၊ ဘယ်လောက် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးပေး
အပြန်အလှန် ဝေဖန် ခံနိုင်အား = သည်းငြီးခံနိုင်အား = မေတ္တာထားနိုင်အား
မရှိရင် အဲ့ဒီ ဥပဒေတွေ အသုံးမတည့်ပါဘူး။
၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစု ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အဲ့ဒါ ချို့တဲ့နေတယ်လေ။
အမှန်တကယ် သူကြီး လည်း တစ်ပွဲတစ်လမ်း ၀င်နွှဲခဲ့လိုက်သင့်တယ်…(ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို)…သူကြီး ကွာ…တို့ရွာသူကြီးလုပ်နေပြီး…နဲနဲပါးပါးတော့ ၀င်မဆွေးနွေးခဲ့ဘူး…ရွာသိက္ခာကျတယ်…ဟွန့်… နောက်တစ်ခါ ရောက်ရင် သူကြီးပါ ၀င်ဆွေးနွေးခဲ့ပုံတွေနဲ့ Santa Monica ရဲ့ အလှအပရှုခင်းလေးတွေပါထပ်တင်ဦးနော်….
ဗုဒ္ဓရဲ့ စနစ် ဟာ ဒီမိုကရေ စီစနစ်လို့ ဆရာတော်တစ်ပါးအကိုးအကားနဲ့ ဟောကြားတာ နာဖူးပါတယ်၊
ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ အနှစ် သာရတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတာ အများကြီးတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။
အာဏာရှင်တွေ တံခါးပိတ်ထားလို့ မမြင်ရပေမယ့်..
သူကြီးဦးခိုင်တို့ လိုတံခါးဖွင့်ကာ အပြင်ရောက်နေပြီး မီဒီယာကနေ အသိအမြင်လမ်းဖွင့်ပေးကာ
တင်ပေးလိုက်လို့ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူသူ အနေနှင့်လွန်စွာပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောလိုက်ပါရစေ..။
သူတို့အဲ့ဒီလို ငြင်းတာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နားထောင်ကြည့်ဖူးချင်တယ်…
ဘာတွေ ပြောပြီး ဘယ်လိုတွေ ငြင်းကြတာလဲလို့ပါ…. စိတ်ဝင်စားစရာပဲ..
သူကြီးကလည်း နည်းနည်းပါးပါးနားထောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဖူး..
ဒီမှာတော့ ဒီလိုအခွင့်အရေးရဖို့ ကြာအုန်းမယ်ထင်တယ် … ရခဲ့ရင်တောင် ဒီကလူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုရယ် သီးခံနိုင်စွမ်းရယ်ကတော့ သူတို့လိုဖြစ်ဖို့ လွယ်မယ်မထင်ဘူး…..အခန့်မသင့်ရင် သွေးထွက်သံယိုတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်..
ဒါပေမဲ့ သူတို့ရထားတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကတော့ မက်မောစရာပဲ ….. ကိုယ့်ဆီမှာရော ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုလွတ်လပ်ခွင့်တွေ လာမှာလည်း…. ကိုယ်တွေကရော ဘယ်လောက်ထိ မှန်မှန်ကန်ကန်လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ကြမှာလဲ…… ……….
လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ရယုံနဲ့တင် မလုံလောက်ဖူး… နည်းလမ်းမှန်စွာ ကျင့်သုံးတတ်ဖို့လည်း အများကြီး လိုပါသေးတယ်….
သူများနိုင်ငံတွေက တကယ်သိတကယ်တတ်လို့ ၀င်ဆွေးနွေးနေကြတာဆိုတော့ ပြသနာမရှိနိုင်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာက ငါ့စကားနွားရ ပြောချင်သူများတော့ ဂွမ်းမှာ ကျိန်းသေဘဲ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံတွင်းမှာ အင်အားကြီးသူကအနိုင်ယူစမြဲ ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အားလုံးပါ။ ကျနော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဘာပဲ။ ကမ္ဘာမှာ ဘာသာကြီးလေးခုရှိပြီး ဒီလေးခုစလုံး ရဲ့ ပန်းတိုင်က သိပ်မကွာလှပါဘူး။ သေပြီးနောက်နဲ့ စပ်ပြီး ပြောကြတာကတော့ အားလုံးနီးပါး တူနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုသွားပြီးတူတာကလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အတော်နားမလည်စရာဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီလိုပြောလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အခြားဘာသာထက်သာလွန်တယ်လို့ တစ်ဖက်သတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
အများပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆနဲ့ တကယ့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒနဲ့က များစွာခြားနားနေတာကို လေ့လာ သိရှိရပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို နိုင်ငံဥပဒေက အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မရပါဘူး။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာ ထေရ၀ါဒ သံဃ ခေါင်းဆောင်များသာ ရှိပြီး အခြားဘာသာဝင်များ၏ ခေါင်းဆောင်များကို ထည့်မထားပါဘူး။
ထေရ၀ါဒ၏ အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းပြီး ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဋ္ဌာနတစ်ခုကတော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့ဆီလည်း အဲဒိလို မြို့တည်မယ်ဗျို့ ……..။ ကိုခိုင် ဒါမှမဟုတ် ကိုသစ် သမဒဖြစ်ရင်……………
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။
ကိုယ့်ဘာသာကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ သိနေလို့သာ ဒီလို စိန်ခေါ်ဝံ့တာလည်း ပါမယ်။ ချီးကျူးပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အဲလို စိန်ခေါ်ရဲလောက်အောင် ကိုယ့်ဘာသာကို တတ်ကျွမ်းနားလည်မှု မရှိဘူး။
အကယ်၍များ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကို အယူအမြင်လွဲသွားရင် ဒုက္ခ။
အီး လိုတော့မတတ်ဘူး ကြည့်ခွင့်ကြားခွင့်တော့ရချင်သား